Namuhla ngezisetshenziswa ezihlukahlukene ngokuvamile zitholakala ezihlekisayo SIFCO. Ungalanda kuzo kalula ngokulandela algorithm ekhethekile ukuthi ukuchaza kule material.
Ngisho phakathi amabhanela ukukhangisa Avame ukutholakala SIFCO kumnandi. Ungalanda kuzo kalula. Ngaphezu kwalokho, kule format zigcinwa ewusizo, ezihlekisayo kanye ezithakazelisayo izithombe animated ukuthi ufuna ukugcina kukhompyutha yakho. Okuvame kakhulu kulo mqondo, ngifaka, amakhathuni kanye funny abalingiswa. Kukhona izindlela eziningana ukulondolozwa. Sizozama ukhululekile kakhulu ngokubona kwethu, futhi ungakhetha kangcono esimweni esithile. Lapho ukusebenza lezi zinto kubalulekile ukuba bayakhohlwa ukulondolozwa kwe-copyright.
Siya ngqo umbuzo indlela yokulanda SIFCO. Okokuqala, sinake format ofuna vusa ifayela. I-GIF uhlobo, beba ama-avatar, kanye namakhadi imiphumela ehlukile. Kulokhu, impendulo yombuzo mayelana uyilanda kanjani SIFCO, ilula. Bayaphepha kukhompyutha njengoba izithombe ezivamile. Thina ukuqondisa isikhombisi segundane ukuze isithombe esifanele. Cindezela inkinobho kwesokudla manipulator. Silindele ukubona kwimenyu yokuqukethwe. Khetha bese zisebenza umsebenzi "Londoloza njengohlu".
Ezinye izinhlobo izithombe
Uma umbuzo imayelana indlela yokulanda SIFCO, kubangelwa ukungabi kwimenyu umongo ukuthi isigaba, kodwa kukhona umbhalo "Mayelana", lesi simo idinga ukuhlolwa ngokwengeziwe. Kulokhu, sizobe cishe ukubhekana ne-SWF-fayela. Kunzima ukulondoloza. Nokho, ngisho lokhu zinganqotshwa. Ukugcina flash izithombe usebenzisa intanethi kumhlinzeki Save2Go. Kopisha ikheli ikhasi nge isithombe esifanele. Khetha okuqukethwe yekheli kusiphequluli. Ukusebenzisa inhlanganisela Ctrl C. Siphendukela isevisi eshiwo ngenhla. Namathisela inkomba olulondoloziwe emkhakheni senzelwe le njongo. Ufaka isikhombisi ebhokisini oyifunayo, bese ucindezela u-Ctrl + V Thina usebenzisa "Londoloza indawo." Silindele isikhathi esithile. Sithola ukuxhumana ngqo zonke ifayela izithombe etholakalayo kuleli khasi. element ngayinye kulekelelwa incazelo kanye nedatha format. Ukugxila ubukhulu, uhlobo igama ifayela, khetha ilinki oyifunayo. Chofoza ke uchofoze-ukuhlela. Esikhathini okuholela ukunqamulela imenyu, ukhethe "Londoloza isixhumanisi njenge ...". Cacisa indlela ukugcina lento. Cacisa igama. Ungagcina ngqo animations kuzo zonke izixhumanisi, bese qhaqha them. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokulanda SIFCO.
Indlela yokulungisa irekhodi odongeni, "VC": isitatimende
Rink e Gorky Park: ukubuyekezwa. Yaseqhweni (Park of Culture and Phumula Gorky.): Imodi Operating